သတင်း - Straight-tooth Slewing Drive ၏ ကိုယ်တိုင်သော့ခတ်ခြင်းကို နားလည်နိုင်ပုံ
Straight-tooth Slewing Drive ၏ ကိုယ်တိုင်သော့ခတ်ခြင်းကို နားလည်နိုင်ပုံ
Gear-type slewing drive ကို straight-tooth slewing drive လို့ မကြာခဏ ရည်ညွှန်းပါတယ်။ဂီယာမူယာသည် လျှောလျှောဂီယာ၏ လက်စွပ်ဂီယာကို ပင်နွန်မှတဆင့် လှည့်ပတ်မောင်းနှင်သည့် လျှော့ချရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။Transmission မူအရ ကောက်ချက်ဆွဲရန် လွယ်ကူသည်။ဖြောင့်သွားသော slewing drive သည် ကိုယ်တိုင်လော့ခ်ချ၍မရပါ။အတိအကျရပ်တန့်လိုပါက၊ လော့ခ်ချရန် ဘရိတ်ကိရိယာကို အသုံးပြုရပါမည်။
အောက်ဖော်ပြပါများသည် ဖြောင့်သွားသော rotary drive ကို လော့ခ်ချသည့် နည်းလမ်းငါးခုဖြစ်သည်။
1. servo မော်တာဖြင့် မောင်းနှင်သော ဖြောင့်သွားသော သွားလျှောင်မောင်းနှင်မှုသည် သေးငယ်သော inertia ၏အခြေအနေအောက်တွင်၊ spur gear စတင်သော့ခတ်ခြင်းကို များသောအားဖြင့် servo motor တစ်ပိုင်းရပ်တန့်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်သည်။ဆာဗာမော်တာ၏သော့ခတ်မှုအား ဂြိုဟ်အလျှော့အတင်းနှင့် သွားတည့်တည့်လှည့်သည့်ဒရိုက်ဖြင့် မောင်းနှင်သည်။လျှော့ချမှုအချိုးကို ချဲ့ထွင်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် စားပွဲဝိုင်းပေါ်တွင် ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။စားပွဲပေါ်ရှိ နောက်ဆုံးသော့ခတ်မှု အင်အားသည် အလွန်ကြီးမားနေသေးသည်၊ ၎င်းသည် သေးငယ်သော inertia ရှိသော အလုပ်အခြေအနေများအတွက် အလွန်သင့်လျော်သည်။
ဟိုက်ဒရောလစ် မော်တာကို အသုံးပြု၍ ရိုးဖြောင့်-tooth rotary drive။အသုံးပြုရာတွင်၊ ဟိုက်ဒရောလစ် မော်တာအား ဖြောင့်သွားသော ဒရိုက်ကို သော့ခတ်နိုင်စေရန် ဘရိတ်အုပ်နိုင်သည်။များသောအားဖြင့် ဟိုက်ဒရောလစ် မော်တာ ဘရိတ်စနစ် ၃ မျိုး ရှိသည်။
accumulator ဖြင့် ဘရိတ်ဖမ်းခြင်း- ဟိုက်ဒရောလစ် မော်တာပေါ်တွင် နှစ်လမ်းညွန်ဘရိတ်ဖမ်းခြင်းကို ရရှိရန် ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာ၏ ဆီဝင်ပေါက်နှင့် ထွက်ပေါက်များအနီးတွင် စုစည်းကိရိယာများကို တပ်ဆင်ပါ။
ပုံမှန်အပိတ်ဘရိတ်ဖြင့် ဘရိတ်အုပ်ခြင်း- ဘရိတ်ဆလင်ဒါရှိ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီသည် ဖိအားဆုံးရှုံးသွားသောအခါ ဘရိတ်သည် ချက်ခြင်းဘရိတ်ပေါက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
3. ဘရိတ်အရှိန်လျှော့မော်တာ၏ ဖြောင့်သွားသော rotary ဒရိုက်ကို အသုံးပြုပါ၊ နှင့် ဘရိတ်မော်တာ၏ ဒစ်ဘရိတ်ကို မော်တာ၏ အထွက်မဟုတ်သော အဆုံးအဖုံးတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ဘရိတ်မော်တာအား ပါဝါရင်းမြစ်နှင့် ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်သည် သံလိုက်ကို ဆွဲဆောင်သည်၊ ဘရိတ် armature အား ဘရိတ်ဒစ်မှ ခွဲထုတ်လိုက်ပြီး မော်တာသည် လှည့်သည်။ဘရိတ်မော်တာသည် ပါဝါဆုံးရှုံးသောအခါ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်သည် သံလိုက်ကို မဆွဲဆောင်နိုင်တော့ဘဲ ဘရိတ်သံချပ်ကာသည် ဘရိတ်ဒစ်ကို ထိတွေ့ကာ မော်တာသည် ချက်ချင်း လည်ပတ်ရပ်တန့်သွားသည်။ဘရိတ်မော်တာ၏ ပါဝါပိတ်ဘရိတ်၏ ဝိသေသလက္ခဏာများအားဖြင့် ရိုးဖြောင့်-tooth rotary drive သော့ခတ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိရှိရပါသည်။
4. ဖြောင့်-tooth rotary drive ပေါ်ရှိ rotating ferrule တွင် ပင်အပေါက်များကို ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ပုံသေအနေအထားတွင်သော့ခတ်ထားရန်လိုအပ်သောသွားအဖြောင့် drive အတွက်၊ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့်အခါ rotating ferrule တွင် pin hole ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပြီး၊ ၎င်းကို frame Pneumatic သို့မဟုတ် hydraulic bolt ယန္တရားပေါ်တွင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်သည်၊ ယန္တရားသည် ပင်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ဖြောင့်သွားသော သွားဒရိုက်သည် လွတ်လပ်စွာ လှည့်နိုင်သည်။ရပ်တန့်ရန် လိုအပ်သော ပုံသေအနေအထားသို့ရောက်ရှိခြင်း၊ bolt ယန္တရားသည် ပင်ကို bolt အပေါက်ထဲသို့ ထည့်သွင်းပြီး ဖြောင့်သွားသောသွားသည် လှည့်နေသောစွပ်စွပ်ကို မောင်းနှင်ပေးသည်။ လက်စွပ်သည် ဖရိန်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး လှည့်၍မရပါ။
5. အမှီအခိုကင်းသောဘရိတ်ဂီယာ။မကြာခဏ ဘရိတ်အုပ်ခြင်းနှင့် ကြီးမားသော ဘရိတ်တွန်းအား လိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းကိစ္စများတွင်၊ အထက်ဖော်ပြပါ ဘရိတ်စနစ်သည် အသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီတော့မည် မဟုတ်ပါ။ကြီးမားသော ဘရိတ်တွန်းအားသည် ဂီယာများ၊ အလျှော့အတင်းများနှင့် မော်တာများကို ဖြစ်စေသည်။နှစ်ခုကြားတွင် ချိတ်ဆက်မှု ပျက်ကွက်ခြင်းသည် လျှော့ချကိရိယာအား အချိန်မတန်မီ ပျက်စီးစေမည်ဖြစ်သည်။ယင်းအတွက်၊ လွတ်လပ်သောဘရိတ်ဂီယာပါရှိသော သွားအဖြောင့်မောင်းကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး သီးခြားဘရိတ်ဂီယာကို လွတ်လပ်သောဘရိတ်ပေါက်စေရန်၊ ဂီယာချိတ်ဆက်မှုချို့ယွင်းမှုကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် ပျက်စီးမှုမဖြစ်စေရန်အတွက် သီးခြားဘရိတ်ဂီယာကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ reducer သို့မဟုတ် motor ။